Nzira Yokuita Sei uye kuisa TWRP kupora pane OnePlus 3
Root uye kuisa TWRP kupora pane OnePlus 3 neyero iri nyore uye danho nehanho. Kana iwe uchinetseka kuburikidza uchishandisa imwecheteyo user interface kana zvirongwa uye uchida kuwana chimwe chinhu pane imwe yako OnePlus 3 zvino rooting ndiyo danho rokutanga rinozarura mikova yose yekuedza nguva dzose chimwe chinhu chitsva. Ne Root, haugoni kuwana zvese zvekutonga asi chaizvoizvo unogona kutonga pamusoro pefoni yako yose system. Ehe pachena pachena kubvongodza kunewo zvimwe zvinetso, asi hupenyu chii pasina kutora chero njodzi! Sezvo kubvisa mikoko kunofungidzirwa senzira isina kukodzera iyo isiri pachena isingatsigwi neWePlus, inonyanya kuguma pakusunungura mafoni yako warranty. Asi usanetseka sezvo paine nzira dzakawanda dzokuti unroot foni yako uye uwane gwaro rechigadziro zvakare.
Vazhinji vashandisi havadi mamwe mapurogiramu akaiswa kare anouya nefoni. Chikonzero chikuru ndechokuti ivo vanodya zvizhinji zvenzvimbo yacho zvisina kufanira. Uyewo hapana nzira iyo vanogona kubudiswa nayo iyo inoita kuti iwedzere kugumbura. Asi hapana chikonzero chokuzvidya mwoyo nokuti kana wawana mudzi wekuwana zvose izvo zvakagara zvashandurwa mapurogiramu kana izvo zvatinoti se bloatware zvinogona kubviswa nyore nyore kubva pane. Pamwe nemidzi isu tava kuonawo matanho ekufambisa TWRP tsika yekutsvaga pane yako OnePlus 3.
Kuisa tsika yekubudirira kunokupa zvikomborero zvizhinji zvekuita mabasa akasiyana-siyana pane yako. Izvi zvinosanganisira kupisa chikamu chechitatu chetsika ROM, tsika dzekwenya, kupukuta deta kana caches, kuchengetedza kana kudzorera kwemamiriro ose (nandroid backups), kuwedzera mukati memurangariro nezvimwe zvakawanda. Pose paunotenga mutsva wechikwata che smartphone, inouya nekuvaka kugadziriswa kwezviyo. Izvi zvigadziriswa zvinogona kuita zvishomanana zvese zvinoenderana nemamiriro ezvinhu akafanana nekutengesa maOTA updates, kupukuta deta uye macaches uye mamwe mashoma. Asi nekuda kwechimwe chekushanda, vazhinji vashandisi vanogara vachida tsika tsika kugadzirisa pamusoro peiyo imwechete.
Sezvaunofanira kunge uchiziva nezvemashure maviri akawana Clockworkmod (CWM) uye Team Win Recovery Project (TWRP) iyo inonyanyozivikanwa pamusana pemabasa avo akazara. Kana ichienzaniswa, kunyange zvazvo CWM ndiyo inonyanya kuda, kunyange zvakadaro TWRP ikozvino iri kuwedzera mukurumbira nenguva yekufamba. Pasina mamwe ado, regai kuenda kune chaiyo chaiyo pamusoro pokuti ungadzika sei nekuisa TWRP tsika yekudzikinura pane OnePlus 3 smartphone.
Edza izvi nenzira yako pachako. Isu paDroidthunder.com hatingazovi nemhosva yekukanganisa kwakaitika kune OnePlus 3 yako nekutevera mutungamiri uyu. Kunyange zvazvo mukana wekuti chigadzirwa chako chizoparara hachina kunyanya ini ndinokukurudzira kuti uite matanho ose sezvaanenge ataurwa pasi apa usingashandisi chero chinhu chako pachako.
Iyi rooting uye TWRP kupora kupenya kwekutsvaga ndeye OnePlus 3. Usatombofunga nezvekuedza izvi pane imwe imwe chigadzirwa kana zvimwe zvakasiyana-siyana sezvo zvingatungamirira kukuvadza kwakanyanya kana kunyange chigadzirwa chebato.
Iyi nzira icharega chikwangwani chako chekushandisa. Asi kana iwe uchida kuzvidzorera zvakare iwe unogona kuita izvozvo nekusa-kutora yako OnePlus 3.
Iva nechokwadi chokuti wakakwereta OnePlus 3 yako zvisati zvasvika kusvika ku60% kuitira kuti uderedze ngozi yekukanganisa panguva yekupenya.
Zvinokurudzirwa kuti iwe utore kubhadhara kwe data yako yese yefoni uye zvigadziri kana pane chimwe chinhu chiri kutadza.
(Inesarudzo) Backup EFS dhairekitori iripo mune yako mafoni system dhairekitori. Dhairekitori iri rine mafoni ako ese ruzivo rwakadai seImII, zvishandiso zvisina waya MAC adhiresi, kodhi yechigadzirwa, uye zvimwe zvakawanda. Saka backup yeiyi folda yakakosha. Iko kunogara kune njodzi yekuti iyi folda yeEFS inogona kukanganiswa. Kana zvikaitika, chishandiso chako chichava chisina basa zvachose & hachizozivikanwe nemutakuri wako. Regedzera chinyorwa chedu kuchengetedza uye kudzoreredza EFS / IMEI dhata:
Unofanirwa kusunungura bootloader yefoni yako isati yaenderera mberi. Tsvaga mutungamiri wedu kuti tibvise bootloader:
Nzira yekushandura nyore nyore Bootloader yeWePlus 3.
Iva nechokwadi chokuti iwe wakabvumira USB kubvisa mamiriro ekufona pafoni yako. Kana zvisina kudaro, ita saizvozvo nokutevera nzira Menyu-> Zvirongwa-> Ongororo dzekuvandudza -> USB debugging. Kana iwe usingaoni Dhigiridziro sarudzo enda enda Zvirongwa-> Nezvefoni uye tapota 7 nguva pane Vaka nhamba. Izvi zvingaita kuti Mudhidziri weChikorodzano ave kuwanikwa mumarongedzera eMenyu
Uyewo shandisai OEM kusunungura uye Advance reboot mode kubva kuMusununguti ongasarudza.
Isa mafaira e-USB chaiwo pakombiyuta yako kuitira kuti aone OnePlus 3 yako paanosangana ne USB data cable. Iwe unogona kuisa maune kubva pachibvumirano chakapiwa pasi apa:
Dhawunirodha One Plus USB madhiraivha e Windows.
Dhavhidha One Driver USB imwe ye Mac.
(Zvichida) Zvidzivirire zvishoma zvishandiso zvese zvakachengeteka pamwe chete nehutachiona hunowanikwa pamakombiyuta yako. Vanogona kukanganisa nzira yacho.
Nzira yekuisa TWRP tsika yekudzikinura pane OnePlus 3 smartphone:
Dhadhadza ADB kuiswa kwefaira yeWePlus 3 smartphone.
Chengeta recovery.img file yeWePlus 3 smartphone.
Step 1: Dharira uye tanga iyi kuisa ADB yefaira pakombiyuta yako.
Step 2: Kana ukangomhanya iyo setupup file, bhuu rebhuruu ruchaonekwa.
Step 3: Iye zvino ichakumbira kuisa ADB uye mafaira e fastboot. Saka nyora tsamba 'Y' uye hit hit key.
Step 4: Ipapo ichakumbira mvumo yekuisa ADB system yakazara. Dzokorora zvakare tsamba 'Y' uye hit hit key.
Izvi zvinotanga kushandiswa kweAdB uye mafaira e fastboot.
Step 5: Zvadaro ichakumbira mvumo yekuisa vatyairi vedhiyo. Dzokorora zvakare tsamba 'Y' uye hit hit key.
Step 6: Izvi zvinotanga kushandiswa kwekufambisa kupinza kwekuita. Shingairira mberi uye gadzirisa hurongwa hwekuisa.
Step 7: Mushure mekugadzirisa kunopera, enda kunzvimbo C: adb. Uchaona mafaira aya mairi:
Step 8: Iye zvino teerera uye kopota recovery.img file mune iyi folda folda.
Step 9: Iye zvino uchishandisa yakashandiswa USB data cable kona yako OnePlus 3 smartphone kune kombiyuta.
Step 10: Muchikwata chechirabhu, shandisa Shift bhobho rekibhodi yako. Nokubata bhatinho rekipiki, chofa nechokuita pane nzvimbo isina chinhu. Kubva pane zvakasarudzwa, sarudza Vhura mavhareji yewindo pano sarudzo. Izvi zvinotanga mutemo wewindo sezvinopa pasi apa:
Step 11: Mumutemo wewindo, chengeta mirairo inotevera uye hit hit:
Kana uchangobva kuvhara mukati yekona, uchaona mharidzo ichitaura kuti 'List of devices' inowanikwa pamwe chete nenhamba dzisina kuitika. Izvi zvichasimbisa kuti OnePlus 3 yako yakabudirira kuwirirana nekombiyuta yako.
Cherechedza: Kana chinhu chakadaro chisingaitike zvakare zvakare re-drivers USB. Kana dambudziko iri richiripo rinoramba richichinja tambo USB kana USB port.
Step 12: Zvino faira murairo unotevera uye tapinda kupinda:
Izvi zvichagadzirisa OnePlus 3 yako mubhoti reloader sezvakaratidzwa pasi apa:
Step 13: Zvadaro tevedzera mutemo we fastboot uye tapinda kupinda:
Uyu murairo uchagadzirisa zvakare hubudiriro hunobudirira nedzimwe nhamba dzisinganzwisisiki.
Step 14: Iye zvino nguva yaro yekutsvaga tsika yeTTRP yekuwana. Saka chengeta murairo unotevera uye hit hit key:
Kungoti iwe warova kupinda mukati, iyo TWRP tsika yekutsvaira kupenya inotanga.
Step 15: Iye zvino gurutsa foni nokunyora manyore USB kabhuku kubva paPC. Zvadaro shandisa uye ubatisise Bhuku pasi + Power button kusvikira imwe yako inopinda mukutora mamiriro.
Step 16: Muna TWRP kupora, uchaona chinyorwa chinotevera:
Ingoidzai 'Usamboti kuratidza ino chinyorwa' uye shandura kuti uite kugadziridza.
Step 17: Iye zvino kana iwe uchinge wapinda muchikanda chikuru che TWRP, sarudza Reboot chisarudzo. Zvadaro sarudza maitiro chisarudzo chekutangazve imwe yako yePlusPlus 3.
Hukuru! Iwe wakabudirira kupenya TWRP tsika yekutsvaga pane yako OnePlus 3 smartphone.
Usati wapfuurira kuenda kuRudziro rweMitambo yekutora ita nechokwadi chekutora nandroid kuchengetedza. Rondedzera zvinyorwa zvedu zvinyorwa zvekutora Nandroid kuchengetedza:
Nzira kuMutambo WePlus OnePlus 3 Mhando yefoni:
Dhaunirodha SuperSU.zip file yeWePlus 3 smartphone.
Step 1: Dhaunirodha SuperSU.zip file pane kombiyuta yako. Usazvinyora.
Step 2: Ita imwe yakoPlusPlus 3 kune kombiyuta uye kopipa SuperSU.zip file pafoni yako mukati kana kunze kwekuchengetedza.
Cherechedza: Iwe unogona kutora zvakananga zip file pafoni yako.
Step 3: Shandisai OnePlus 3 yako uye boot mu TWRP tsika tsika yekutsvaga. Nokuita kudaro, funga uye ubatisise Mubhuku Down key + Power Key panguva imwe chete kusvikira foni yako ichienda pakugadzirisa mamiriro.
Step 4: Pamusoro pemenyu ye TWRP, tora paIngai yekusarudza. Zvadaro enda kuFair SuperSU.zip uye sarudza.
Step 5: Pachirongwa chinotevera shandisai kuti utange kupenya.
Step 6: Mushure mekupedzisa, iwe uchaona mharidzo ichiti ibudirire pahwindo.
Step 7: Zvino tangazve imwe yako OnePlus 3 nokufamba kuenda Dzorera> Sisitimu mu TWRP kupora mode pachayo.
Step 8: Ndizvo zvose! Iwe wakabudirira kubvisa yako OnePlus 3 smartphone. Iwe unogona kusimbisa zvakafanana kubva kuRot Checker app.
Voila! Iwe wakabudirira kudzika midzi uye nekuvhenekera Team Win Kudzorera Project (TWRP) pane yako OnePlus 3 smartphone. Iwe unogona ikozvino kushandura & kuona iyo masystem system, ita nandroid backup, flash tsika maROM, pukuta data / cache uye ita zvimwe zvakawanda. Chekupedzisira kana ukasangana nechero chinetso uchinge uchifamba nenzira, saka ndiudze iwe kuburikidza nezvakataurwa. Kusvika ipapo Nakidzwa! ?
Maitiro eBhuot Samsung Galaxy S8 + muKudzorera Mode